We She Me: မာစတာကီး
စကားဝိုင်း တစ်ခုမှာ အမျိူးသမီး တစ်ယောက်က ပြောတယ်
ရှင်တို့ ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေနဲ့ ထည်လဲ အိပ်တော့ “ယောက်ျားကောင်း မောင်းမတစ်ထောင်”တဲ့။ မိန်းမတွေက ယောက်ျား တစ်ယောက်ထက်များ ပိုအိပ်မိရင်တော့ မကောင်းတဲ့ မိန်းမ။ ကြေးစားမတဲ့။ အတော်လည်း မတရားတာပဲ။ မိန်းမတွေကိုဆိုရင် နှိမ်ချင်ကြတာပဲ။
အဲဒီတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ပြန်ပြောတယ်။
ဒါက ဒီလို ရှိပါတယ် အစ်မကြီးရယ်။ သော့တံတစ်ချောင်းက သော့ခလောက်တွေ အများကြီးကို ဖွင့်နိုင်ရင် “မာစတာကီး”လို့ ခေါ်တယ်လေ။ သော့ခလောက် တစ်ခုကို ဘယ်သော့တံမဆို ဖွင့်နိုင်ရင်တော့ သုံးစားလို့မရတဲ့ သော့ခလောက် ဖြစ်သွားမှာပေါ့....
မှတ်ချက် - အင်တာနက်မှ ဟာသကို ဘာသာပြန်သည်။
| FLAGS: Encore , Jokes
Anonymous - 1/26/10, 11:59 PM
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် - 1/27/10, 12:00 AM
ရွှင်ပြုံးစွာ ဖတ်သွားတယ် အစ်ကိုရေ...
မှတ်လည်း မှတ်သားလိုက်တယ်.. (သူများကို ပြန်ပြောဖို့)
khin oo may - 1/27/10, 12:46 AM
ချေပါဘို့စကားလုံ့းရှာလိုက်ဦးမည်။အ ကြံရက ပြန်လာခဲ့မည်။
Anonymous - 1/27/10, 1:15 AM
တော်တော် ရှင်းလင်းတဲ့ ဥပမာပဲ တွေ့လဲတွေ့တတ်ပါပေတယ် ကိုမာစတာကီး ရယ်
Shinlay - 1/27/10, 1:35 AM
မှတ်သားသွားပါတယ်။ Thomas ကိုပြောပြတော့ ရီလိုက်တာ...
Anonymous - 1/27/10, 2:38 AM
ရီရတယ်။ Shirley တို. Amy တို.ကိုလဲပြောပြလိုက်အုံးမှာ။
Anonymous - 1/27/10, 3:09 AM
သော့ခလောက်ကြီးကလည်း ပြန်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး
ဒီသော့ တစ်ချောင်းထဲ နေ့တိုင်းဖွင့်ခံနေရတာ ပျင်းလို့ တခြားသော့ ချောင်းတွေပါ ဖွင့်ရအောင် ခွင့်ပေးလိုက်မယ်လို့
Anonymous - 1/27/10, 9:28 AM
Think about it in term of productivity, if you put togetheraman with 500 women, there isachance of 500 babies afterayear. But you get only one baby by putting the other way round. But this all nonsenses are created by those men to get laid with different person whenever possible.
တေဇာ - 1/27/10, 10:18 AM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း - 1/27/10, 10:18 AM
စန္ဒကူးမေ - 1/27/10, 11:04 AM
စကားနိုင်လုပြောတာဖြစ်ဖြစ်...အပျော်နောက်တာဖြစ်ဖြစ် အတည်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်..း)
SDL - 1/27/10, 12:31 PM
တောင်ပေါ်သား - 1/27/10, 12:55 PM
သူဟာလေးနဲ့ သူတော့ ဟုတ်နေတယ်း)
Moe Cho Thinn - 1/27/10, 2:41 PM
Andy Myint - 1/27/10, 3:53 PM
ဟီးဟီး.. မဟုတ်ရပါဘူး။ မာစတာကီး အားကျရင် မာလကီးယားသွားမှာပေါ့.. မချိုသင်းရယ်..
JulyDream - 1/27/10, 5:31 PM
မာစတာကီးအကြောင်း မှတ်သားထားလိုက်ပြီ။ အတော် အသုံးဝင်မယ့် ဥပမာတစ်ခုပါပဲ။
Anonymous - 1/27/10, 6:09 PM
မာစတာကီး ကွ ဆိုပြီး တွေ့သမျှတံခါးတွေလျှောက်ဖွင့်ကုန်ရင် ဒုတ်ခ..
Anonymous - 1/27/10, 6:12 PM
ကလေးတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး.လူကြီးတွေလည်း အမှတ်မှားကုန်မှာစိုးရတယ်..
ကိုဂျူလိုင် ဆို မှတ်ထားလိုက်ပြီတဲ့။ အတော်အသုံးဝင်မယ်ဆိုတာဘာလို့လဲမသိ..နော်။
ကိုအန်ဒီ-အဟမ်း အဟမ်း ပညာပေးလေးထပ်တင်ပါ။
Phyoe Khaing Min - 1/27/10, 8:41 PM
ဒီလိုစကားနိုင်လုတဲ့ စာသားလေးကို ကြည့် ပြီး သဘောကျမိပါတယ်..
Anonymous - 1/27/10, 9:28 PM
သော့ခလောက်ကို အဝေးကနေ ရီမုတ်နဲ့လှမ်းဖွင့်တာကိုကျတော့ မာစတာဘိတ်တဲ့။ :)
လုလု - 1/27/10, 11:45 PM
ယဉ် - 1/28/10, 1:09 AM
အမလေး ..ဒီလို မာစတာကီး ကြီးတော့ လိုချင်ဘူး..ကြောက်စရာကြီး
khin oo may - 1/28/10, 2:55 AM
ဆေးရုံသို့ fall from height ဖြင့်လူနာအမျိုးသားတစ်ဦးရောက်လာသည်။ အလုပ်သင်ဆရာဝန်ကလေးမှ လိုအပ်သည်များကိုမေးမြန်းသည်။ ဘာဖြစ်လို့သုံးထပ်ကနေခုန်ချရတာလဲဗျာ။
လူနာမှပြန်ဖြေသည်။။ကျွန်တော်က lover နဲ့အိပ်နေတာဗျာ။အဲဒါ သူ့ အမျိုးသားပြန်လာတယ် ဆိုလို့လန့်ပြီးပြူတင်းပေါက်ဖွှုင့်ပြီးခုန်ချလိုက်မိတာဘဲ။
ဟင် (ဆရာဝန်လေးမှ) ခင်ဗျာ. သုံးထပ်ကနေ…….
လူနာ: ဒီလိုဗျာ ကျွန်တော့အိမ်က တထပ်အိမ်ခင်ဗျ.။ မာစတာကီးက ဝင်းဒိုးမှာတောာ့ applicable မဖြစ်ဘူးဗျာ။
ချစ်ကြည်အေး - 1/29/10, 4:54 PM
sosegado - 2/1/10, 12:45 AM
သော့ခလောက်တွေ ကလည်း spare ကီးထားတတ်ပါတယ်…
သက်ဝေ - 2/1/10, 1:23 AM
ပိုစ့်ရော... ကော်မန့်တွေရော ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ...
ကြံကြံဖန်ဖန် တွေ့လဲတွေ့တတ်တဲ့ ကိုအန်ဒီပဲ...း))
rose of sharon - 2/1/10, 3:31 PM
Minn Kyaw - 2/1/10, 7:55 PM
ယောကျာင်္လေးတွေက လှေကား ၃ထစ်ဆင်းမှ လူပျိုဖြစ်တယ်တဲ့ ... သူတို့ကျတော့ အိမ်ပေါ်ကနေ ဖရီး ... ဖရီးဆိုရင် ... လှေကားတောင် ကျိုးတယ်လို့ပြောတာကြားဘူးတယ်။ နားကြားရိုင်းရင်တော့ ဖျတ်ပြစ်လိုက်ပါ။ မှတ်သားစရာလေးမို့ဝေငှလိုက်တာပါ။
9-9 - 2/2/10, 10:02 PM
Yin Yin - 2/5/10, 6:14 PM
yee ya dal.... yee ya dal so tar htat pyan phay te'example lay kaadate pal shi par tal ...
di har tha lay mhar may te'amyo tha mee ka... girl twe ko theik khar cha lite tar ne'atue tue pe'
but...amyo thar tweatu khoe mhar mha tot kyauk ya dal...
mhat thar sayar 1 khu po ya lo kyae zue par...
သားကြီး - 6/12/11, 6:02 AM
share ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ .... :p
▼ January ( 5)